EUROPE | RayHaber | Zọ okporo ụzọ | Okporo ụzọ | cable ụgbọ ala
Ighalo ụgbọ elu Russia Crimea bidoro; Site na owuwu nke Crimea, a na-ejikọ ala Russia na ala nke Crimea, Moscow na St.Petersburg, nke a na-atụ anya na ọ ga-amalite n'oge na-adịghị anya, tiketi ụgbọ oloko kwụsịrị gosipụtara mmasị dị ukwuu. 25 bụ naanị otu maka Sevastopol-St.Petersburg [More ...]
Akụkọ Orsay yiri Haydarpaşa Train Station: 1939 bụ ụlọ ọrụ tụfuru agwa ọdụ ya, ọ baghịkwa uru n'ihi na ọ dịghị mma maka ụgbọ oloko ogologo. Na 1970, ha na-eche imebi ulo ma wuo otite kama. Mgbe ndị Parisi jụrụ nke a, gọọmentị [More ...]
Bucharest Tram Tender Durmazlar Enwee Mmeri; Romania isi obodo Bucharest na tram obi na-amị Turkey mbụ amaala tram Durmazlar Ijidere meriri. Dika akuko sitere na ndi oru mgbasa ozi nke Romania Durmazlar Onye isi Director Abdullah Bocan mechiri ncha ahu [More ...]
Turkey mbụ okporo ígwè ụgbọala ekspootu BozankayaGa-emepụta trakt dị ala nke 16% 100 maka obodo Rome nke Iaşi. A haziri ma mepụta ụgbọ ala azụmaahịa na ụgbọ okporo ígwè dị na Ankara Bozankaya16 mepere site na Iaşi, Romania [More ...]
Havaş gara Mgbakọ Gburugburu Mba ụwa; Ọrụ ebe Havas Turkey zuru ụwa ọnụ brand na ndị ụlọ ọrụ ndị bụ isi na egwuregwu na International Ground Services Conference na-eweta ọnụ kasị prestigious na otu (PSAs) wee ebe. Ọgbakọ nke afọ a mepere ụzọ ya na Amsterdam [More ...]
Alarko Holding, nde Euro nke 619, gụnyere VAT, nke ga-agụnye ihe dị ka nde naịra 4 pound. Agbanyeghị, akụkọ ọjọọ sitere na Romania. N’ọnwa Jenụwarị n’afọ a, Alarko Holding kpọsara ọkwa nkwupụta ihu ọha (KAP). nkọwa [More ...]
Ekwuputara na ihe karịrị nde nde 2018, tinyere ụgbọ ala 103 puku na narị puku 795, ka agafere na May 8 site na Crimean Bridge na-ejikọ Krasnodar na Crimea na Kerch Strait. Dabere na akụkọ ahụ na Sputniknews; [More ...]
Mega Mega, St.Petersburg Hamburg Cost nke Oke Speed ​​Line 40 Ijeri dollar; Ekwuputara na arụ ọrụ nke okporo ụzọ dị elu n’etiti St. Petersburg na Hamburg, Germany nọ na nhazi. Atụmatụ nke odeakwụkwọ Steeti Belarus Grigoriy Rapota, St.Petersburg-Minsk-Hamburg [More ...]
N'ime akụkọ banyere mkpesa 2019 nke 3, solọ Ọrụ Ọgụgụ Kosovo kwuru na n'ọnwa ikpeazụ nke 3, ihe dị ka ndị njem njem 90 puku mmadụ ji ụgbọ oloko ahụ mee ihe dị ka ụzọ njem. Kolọ ọrụ Kosovo Statistical Agency na-enye ozi gbasara ikuku, ụzọ ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ na nkwukọrịta. [More ...]
Ragbọ okporo ígwè Russia na Serbia bịanyere aka na Montenegro (Bar) na nkwekọrịta maka mmejuputa atumatu a iji mee ka usoro okporo ụzọ okporo ụzọ Belgrade - Vrbnica. Oleg Belozerov, Onye isi oche na onye isi oche nke Railways Russia na osote onye isi ala [More ...]
Eweghachiri n'ọnụ ụzọ ọdachi na isi obodo German. 760 Freiburg Fans n'ụgbọ ahụ mebiri. N'ime ndị 4 merụrụ ahụ, a na-agwọ 3 n'ụlọ ọgwụ. Konuk Otu ndị ọbịa mechara egwuregwu n'etiti Berlin na Berlin na Freiburg furu 2-0 [More ...]
Turkey nnukwu osompi maka Volkswagen ọhụrụ factory dị na Bulgaria, amụbawo okpukpu abụọ ya na-enye ọchịchị ịkpali. VW si management kwuru na Syria aghara metụtara arụmọrụ ke Turkey. Nwa ibu German bụ Volkswagen (VW) iji guzobe ụlọ ọrụ ọhụrụ na-achọ oghere [More ...]
Alstom Foundation kwuputara nhọrọ ikpeazụ ya nke ọrụ rubere maka oge 2019. Site na ngụkọta ọrụ 158 a gosipụtara, ndị ọrụ Alstom gosipụtaghachiri nkwa ha maka ọrụ ebere na nkwado obodo. Alstom Foundation, Istanbul / Turkey si "bidown [More ...]
Nnukwu forkwụ Maka Modelite Railway Line nke Polish
Budimex Budownictwo na PKP Polish Railway Lines bịanyere aka na nkwekọrịta ruru euro 324 nde (1.4 billion PLN) maka mmezi nke Goczałkowice-Zdrój - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg na Silesia. Ihe oru ngo a gunyere uzo uzo ugbo ala nke 47 na 56 km n’elu. [More ...]